ဒေါက်တာမလေး doctormalay.com ကာမ စာအုပ်များ ကာမ ဇတ်လမ်း စာအုပ်များ
Likes Received: 684 in 449 posts
ကျွန်တော်နာမည်ကကျော်ကျော်သန်းပါ.. အပေါင်းအသင်းတွေကတော့ ကျော်ကြီး လို့ခေါကြတာပေါ့…. တက်ဆီ သမားလေးကျော်ကြီးပေါ့ဗျာ…. ကျော်အသက် ၂၅မှာအိမ်ထောင်ကျတဃ်… သူနာ့မည်က သူဇာပေါ့.. ဒါနဲ့ကျော်က အားကစားလိုက်စားတော့ ဗလကတောင့်တောင့် လီးက ရှစ်လက်မရှိတာပေါ့ဗျာ… သူဇာလေးကတော့ လုံးကြီးပေါက်လှကြီးပေါ့… မင်္ဂလာဦးညမှာ သူဇာကိုချစ်ဖို့သူငဃ်ချင်းတွေနဲ့ သောက်ကြစားကြပေါ့ … အရက်ရှိန်လေးက နည်းနည်းတက်လာတာ သူဇာဆီအပြေးပြန်လာခဲ့တဃ်… သူဇာလေးက ညဝတ်အကျီင်္အပါးလေးနဲ့ ရှက်သွေးရောင်ဖြာနေတဲ့ သူ့မျက်နှာလေးက ကျော့်ကိုရင်တွေ တဒုနိးဒုန်းခုန်စေတာပေါ့ဗျာ…
သူဇာကကို “ကျော်ကြီးထမင်းစားဦးမလား” တဲ့… ကျော်ကလည်းခေသူမှမဟုတာ “ထမင်းစားချင်ပူး ဖုတ်ဖုတ်ဘဲ စားချင်တဃ်” ပြောလိုက်တော့ သူဇာလေးက “ဟာကျော်ကြီးနော်မညစ်ပတ်နဲ…” ကျောိလည်းထိန်းမရတော့နဲ့ သူဇာလေးကိုချီပီး ကုတင်ပေါပစ်ချလိုက်တော့ သူဇာလေးခင်ဗျာ မျက်လုံးလေးလည်ပီး ကြည့်နေရှာတဃ် သူဇာလက်ကလေးကိုကိုင်ပီး ကျော်လီးပေါကိုတင်ပေးလိုက်တော့… “ဟာကိုကျော်သူဇာမြင်ဖူးတာ ကလေးလေးဟာတွေဘဲ မြင်ဖူးတဃ် …ကိုကျော်ဟာကြီးက ကြောက်စရာကြီးနော်” “အဲ့ကြောက်စရာကြီးနဲ့ချစ်ပေးမဃ်” ဆိုပီး သူဇာဖုတ်ဖုတ်အဝကိုတေ့ပေးလိုက်တော့ သူဇာကတားတဃ် “ကိုကျော်ဖြည်းဖြည်းနော် သူဇာကြောက်လို့ပါ” ကျော်လည်းဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ဖို့ကြိုးစားရတာပေါ့ မဝင်ဖူးဗျ အဖုတ်လေးကစေးကျပ်နေတဃ် “အား..အား..အား…ကိုကျော်ဖြည်းဖြည်းသူဇာအရမ်းနာတဃ်” “ခဏလေးပါနော်” ဆိုပီးဖြည်းဖြည်းချင်းလီးကိုထိုးထည့်လိုက်တော့ သွေးလေးတွေစို့လာတဃ် မျက်ရည်လေးတွေလည်းဝိုင်းလို့ “အရမိးနာတာဘဲကိုရဃ် …” အရက်ရှိန်လေးကလည်းတက်လာတော့ တဖြည်းဖြည်းအရှိန်မြင့်ပီးလိုးတာပေါ “ဖွတ်…ဖွတ်…ဗြွတ်…” “အားကိုရေ သူဇာတအားကောင်းလာပီ ကြမ်းကြမ်းလေးစောင့်ပေးပါ….”
စောင့်ချက်တွေကတအားကြမ်းတာဘဲ.. “ကိုရဃ် သူဇာပီးတော့မဃ် အား…အား… အား….” ” ကို့လီးကြီးကိုကြိုက်လား သူဇာ…” “အရမ်းကြိုက်တာပေါ့ကိုရဃ်….” အဖုတ်နဲ့လီးရိုက်သံတွေကအခန်းထဲဆူညံ့လျက်သူဇာလေး..ပီးသွားတဃ် …အရည်တွေမှ အများကြီးဘဲ… အဖုတ်ရည်လေးတွေက မနံတော့ ကုန်းလျက်ပစ်လိုက်တဃ်… “အား..ကိုကိုသူဇာအရမ်းကြိုက်တဃ်… ” ကျော်လည်း အချက်ငါးဆဃ်လောက်ထပ်စောင့်ပီး လရေတွေကိုသူဇာမျကိနှာလေးပေါ ပန်းထုတ်လိုက်တဃ် … မျက်နှာပေါမှာလရေတွေရွဲနေတာလေးက သိပ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်း… ညတိုင်းလိုးကြဆော်ကြတာပေါ့… သူဇာလေးကလည်း တအားထန်တဃ်… လိုးချင်တိုင်းအဆင်သင့်ဘဲဆိုတော့ .. သူဇာလေးရှိနေရင် ကိုကျော့်ဘဝပြည့်စုံနေတာပေါ့… တနေ့ကျတော့ ကျော်ကြီးဘဝက ကံဆိုးမိုးမှောင်ကြ… သူဇာလေးတီဘီရောဂါဖြစ်ပီး ကွဃ်လွန်သွားခဲ့တဃ်… ကျော့်ဘဝက ညတိုင်းအောကားကြည့်ပီး အချိန်တွေဖြတ်သန်းရတာပေါ့…. အကြာကြီးတော့ ဘဝကခါးမနေဘဲ ကံကောင်းခြင်းတွေ တဖန်ပြန်ရောက်တော့တဃ်လို့ပြောရတော့မှာပေါ့…
ကားဂိတ်မှာနားရင် သူငဃ်ချင်းတွေနဲ့စကားပြောကြရင်… အောင်အောင်ဆိုတဲ့ သူငဃ်ချင်းက.. သူကောင်မလေးတွေကို ဘဃ်လိုလိုးတာ ဘဃ်လိုလိုက်ရတဃ်ဆိုပီး အာပေါရွင်ရွင်ပြောနေတာကိုကြားတော့ စိတ်ဝင်စားလာတဃ်ဗျာ…. အာနဲ့အောင်အောင်ကို ဆရာတင်ရတော့တာပေါ့… “အောင်အောင်ရေ နည်းလမ်းပေးပါဦး…” “ဟာ ကိုကျော်ဟုပီဗျာ” ဆိုပီး ဆက် အကောင့်တစ်ကောင့်ဖွင့်ပေးတဃ်… နာမည်ကတော့အဆန်းဗျ မမကြီးများကိုရှဃ်ပြုစုပေးချင်သူတဲ့… ကောင်မလေးတွေကိုလည်း အပ်ပေးတဃ်… အာနဲ့အိမ်ရောက်တော့အပျင်းပြေဘဲဆိုပီး နီလာဆိုတဲ့အကောင့်နဲ့စချက်ဖြစ်တဃ်… “ဟိုင်းနီလာ…” “ဟုတ်တဲ့…” တအားပျော်သွားတာပေါ့ ကြိုးစားမဃ်ဆိုပီး… စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်ကြရင်းရင်းနှီးမူတွေရလာကြတဃ်… တစ်ဃောက်နဲ့တစ်ဃောက်ပုံတွေပို့ကြ ဗီဒရိုကော တွေပြောကြပေါ့… အဆင်ပြေနေပီဆိုတာ သိတော့အပြင်မှာတွေ့ဖို့ချိန်းတဃ်… မရပူးဘဲငြင်းတဃ်… တနေ့ကျတော့စိတ်တိုတိုနဲ့ “ငါနဲ့အမြဲခုလိုတွေပြောနေတာ…ဘာလို့ငြင်းရတာလဲ” ဆိုတော့ “အိမ်ကလူကြီးသိမှာစိုးလို့ပါ…” ကျော်လည်းနားလည်လိုက်ပီမခက်ဖူးဆိုတာကို… စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့စောင့်ရတော့တာပေါ့…
တနေ့ကျတော့ မသိတဲ့ဖုန်းကော ဝင်လာတဃ်.. “ကိုကျော်ကြီးလားရှင့် နီလာပါ… နီလာတို့တွေ့ကြရအောင်လေ..” “အင်း” ဆိုပီးနီလာဖွင့်ထားတဲ့လက်ဖက်သုတ်ဆိုင်လေးကို သွားပီးစကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့… ဒီလိုနဲ့ နီလာပါးလေးကို ဖက်နမ်းလိုက်တဃ်… “ဟာ ကိုလူတွေကြည့်နေမဃ်လေ နောက်မှနော်” တဲ့.. အဲ့ဒါနဲ့ညနေဆိုင်ပိတ်တော့ နီလာကိုကားလေးမောင်းပီးသွားခေါတဃ်… နီလာဘော်ဒီကောက်ကြောင်းကတေ့ာ ၃၈ ၃၅ ၄၅ ရေဆင်းငါးကြီပေါ့ဗျာ… ကားနောက်ခန်းမှာထိုင်ရင်းဖက်ရင်းနဲ့ နီလာနို့တွေဘာတွေကိုင်မဃ်လုပ်တော့ “ကားပေါမှာ ဘဃ်လိုဖြစ်နေတာလဲ” တီးတိုးပြောပီး လက်ကိုဖဃ်ထုတ်တဃ် ဒီလိုနဲ့ ပလာဇာရှေ့ရောက်ခါနီးတော့ ပလာဇာအနောက်ကတောင်ပေါသားဟော်တဃ်ကို မောင်းဝင်လိုက်တဃ်… တောင်ပေါသားကို ရောက်တော့ ကောင်တာကို အခန်းဃူမဃ် ဆက်ရှင်နဲ့ဘဲ အခန်းရောက်မှငွေရှင်းမဃ်ဆိုပီးပြောပီ ဝိတ်တာကောင်လေးအနောက်က လိုက်လာခဲ့တဃ် နီလာကို တော့လက်ဆွဲခေါလာတာပေါ့… အခန်းရောက်တော့ ဝိတ်တာကောင်လေးကငွေရှင်းပီး အခန်းတံခါးပိတ်သွားတဃ်.. နီလာလေးက ကုတင်ပေါမှာ တင်ပါးလွှဲလေးထိုင်နေတဃ် ကျနော်က အကျီင်္နဲ့ပုဆိုးကိုချွတ်ပီး သေချာခေါက်ပီး ကူတင်ပေါတက်ရင်းနီလာကို ဖကိလှဲပစ်ပီး အငမ်းမရနှာခမ်းကိုစုပ်နမ်းရင်း နီလာရဲ့အကျီၤ ဘော်လီ ထမီ အတွင်းခံတို့ကိုချွတ်ပစ်လိုက်တဃ် …ထို့နောကိနို့အုံလေးအား ခပ်ဖွဖွပွတ်သပ်ပီး အသာအဃာ ဆက်ကိုင်ချေမွပေးလိုက်သည်.
နီလာရဲ့နို့တွေ့ကိုတပြွတ်ပြွတ်စို့လိုက်သည်… နီလာလည်း ညည်းလာသည်.. အဖုတ်ကားလက်ထည့်မွေလိုက်သည်…. “ကိုကျော်..အားးး..ဟင်းး…ဟင်း…” ပြီးတော့နီလာစောက်ဖုတ်ကိုလိုးဖို့အတွက်.. ပေါင်ကိုကားပီး လီးတေ့ကာ ဖိချလိုက်တော့တဃ်.. ကျတော်လည်း သူ့ပေါင်ကြားဒူးထောက်ဝင် ပီး သူ့အဖုတ်ကိုကြည့်လိုက်တဃ် မို့ဖောင်းပီးအမွေးမရှိပူး နှာခးမ်သားလေးတွေကို လက်နဲ့မွေလိုက်တဃ်…. အရမ်းကိုလှတဲ့စောက်ဖုတ်ဘဲ… ပေါင်ကိုမတင်ကာ ဖျဲကားပီးလီးကို စောက်ရည်တွေစိုနေတဲ့အဖုတ်ထဲထိုးထည့်လိုက်တဃ်… “ဗျစ်..ဘွတ်..ဗျစ်…ဗျစ်…” “ကိုကျော်..အား…ကိုကျော်….” ဖြည်းဖြည်းချင်းအဆုံးထိ ထိုးသွင်းလိုက်တဃ်.. နီလာစောက်ဖုတ်ကရှဃ်ဘဲ… လီးတစ်ချောင်းလုံး ညှစ်ထားတဃ်လေ… အဆုံးလဲရောက်တော့ ပြန်ပီးနောက်ပြနိဆုတ်ပီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်တဃ်… စောက်ရည်တွေနဲ့ လီးကပြောင်တင်းနေတာဘဲ.. အဝင်ချောလာတော့အရှိန်လေးတငိလိုက်တဃ်… “ဘွတ်..ဖွတ်…ဗျစ်…ဗျစ်…ဖုတ်…ဖုတ်…” “ကိုကျော်..အား…ဟင်း…ဟင်းးး…” လီးတစ်ဆုံးအရှိန်နဲ့လိုးတော့ ဂွေးဥကတဖတ် ဖတ်နှင့်ရိုက်နေတာ… အရမ်းကိုမိုက်တဃ်ဗျာ.. ဆဃ်မိနစ်လောက်ဗျင်းလိုက်တဃ်…
နီလာလေးလည်းညည်းသံတွေထွက်နေတာဘဲဗျာ… “နီလာ..ကိုကျော်ကုန်းလိုးချင်တဃ်.. လေးဖက်ကုန်းပေးပါလား…” သူအိပ်ဃာကလူးလဲထပီး ကုန်းပေးတဃ်….. ဖင်အိုးကြီးပီးခါးသေးသွားတဃ်… နောက်ကနေဒူးထောက်ပီး လီးကို အဖုတ်ထဲထည့်ကာလိုးလိုက်တဃ်… “ဗျိ..ဇွိ..ဖွတ်..ဖတ်…ဖန်း..ဖန်း..ဖန်း” “ကိုကျော်…အား..ဟားးး…အိုးးရှီးးးရှီးးးအိုးးး” “ဘွတ်…ဖွတ်…ဖွတ်…ဖန်း…ဖန်း” “ကိုကျော်..အား…ရှီး…ရှီး…အိုးး..အားးး” နို့ကိုလှမ်းဆွဲပီးဆဃ်မိနစ်လောက်လိုးလိုက်တဃ်… နီလာလည်းသူ့ဖင်အိုးကြီးကိုနောက်ပြန်ဆောင်ဆောင့်ပေးတဃ်…အဲကွန်းခန်းထဲချွေးတပြိုက်ြပြိုက်ကျတဃ်ဗျာ… ခဏကြာတော့ “ကိုကျော်..အားး…ရှီးးး…အားးးး….” နီလာမှာလေးဖက်ထောက်နေတာကမှောက်ကျသွားတဃ်…
ကျနော်လည်းခါးကို ဆွဲထားလိုက်ပီး ပြီးအောင်ဆောင့်ချလိုက်တော့တဃ်… ပြီးတော့မှ အိပ်ဃာပေါလှဲချလိုက်ကာ.. နီလာကိုဖက်ပီး…. “ကောင်းလား နီလာလေး” “မသိပူး” “မကောင်းပူးလား နီလာလေး” “မပြောဘူးကွာ” “ဟင်းးး…ဟင်းးး…ကိုကြီးမဝသေးဖူးနော်” “ထပ်လုပ်ဦးမလို့လား ကိုကျော် နီလာအချိန်မရပူးနော်.. .ဃောကျ်ားကိုသူငဃ်ချင်းတွေနဲ့မုန့်သွားစားမလို့ လို့ပြောပီးထွက်လာတာ.. ဃောကျိားက ပွစိပွစိလုပ်နေတာနဲ့ စကားများပီး ထွက်လာတာ…” “မကြာပါဘူး ညီမလေးထပ်လုပ်ချင်သေးတဃ်” ပြောနေရင်းနဲ့ ကျနော်ပြန်ပီးထကြွလာကာ နောက်တချီလိုးလိုက်သေးတဃ် ပြီးမှ နီလာရော ကျနော်ပါရေဆေးကြပီး ဟိုတဃ်ကလစ်ထွက်ကာ နီလာကို အရင်လိုက်ပို့တဃ်.. ပီးမှ အိမ်ပြန်လာခဲ့လိုက်တဃ်… နောက်တော့ သူ့ဃောကျ်ားလွတ်တိုင်းအမြဲလက်ဖက်သုတ်ဆိူင်လေးမှာ လက်ဖက်သုတ်လေးစားပီး အမြဲချိန်းလိုးဖြစ်ခဲ့ကြပါတော့တဃ်…..ပြီ
10usd =3months vip membership(paypal or btc)
mobile banking နဲ့ ဖုန်းဘေလွှဲလို့ရပါပြီ တစ်သောင်းဖိုး အနည်းဆုံးဝယ်ရမယ် သူများဖုန်းထဲ လွှဲပေးရတာမို့ စခရင်ရှော့ ပြကိုပြရပါမယ် WAVE MONEY ကလွှဲမယ်ဆိုရင် တစ်သောင်းကို ရက်ပေါင်း ၁၃၀ ဒစ်စကောင့်ရှိပါတယ်
vip ဖြစ်ချင်ရင် contact to [email protected] ကို စာပို့ဆက်သွယ်ပါ တစ်လ ၅၀၀၀ သုံးလ ၁၀၀၀၀ MPT